မိမိတို့ ပြည်ထောင်စုကြီး နှင့် မိမိတို့ တစ်ဦးချင်း၏ ခံယူရမည့်စိတ်ထားများ - Yangon Nation News
George Floyd အား ရဲမှ ဖမ်းဆီးမူထက်လွန်ကဲသည့် ဖြစ်စဉ်ကြောင့်…..
George Floyd သေဆုံးခဲ့မူဖြစ်ခဲ့ပြီး…
နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ဆန္ဒပြမူများဖြစ်လာနေသည်ကို တွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။
မိမိတို့မှ ထင်မထားသော ဖြစ်စဉ်များကိုလည်း တစ်အံ့ တစ်ဘြ တွေ့နေကြရပါတယ်။
မိမိတို့လို ဆင်းရဲပြီး လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်များ ကိုပါ ပိတ်ပင်ထားပါတယ်ဟူ၍ စွပ်စွဲမူ အကြောင်းပြချက် များဖြင့်
အမြဲတစ်စေ ရေးသား ပြောဆိုနေကြသည့် နိုင်ငံများမှာ အဓိက ပါဝင်နေသော အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုး၌ ယခုလို အဖြစ်အပျက် ဖြစ်စဉ်များကို မြင်ကြရသည်မှာ မိမိတို့အနေနဲ့
မယုံနိုင်လောက်အောင် အံ့ ဘြ တုန်လူပ်မိပါတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသားများသည် ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံး ကွာကြမူဟူ၍ ကင်ပွန်းတပ်ပါရစေ။
ထို့အပြင် စည်းပျက်၊ကမ်းပျက်နှင့် စရိုက်ဆိုးရှိသူများသည် ချမ်းသာ၊ဆင်းရဲ၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ media လွပ်ခွင့် မရှီသည့် – အတန်အသင့်ရှိသည့် – ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသော ကမ္ဘာ့ မည်သည့်နိုင်ငံမှာမဆိုရှိနေမှာပါလားဟု ကောက်ချက်
သို့ကြောင့်လည်း ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်း ကြီးက ရှိနေတာ သို့မဟုတ် ရပ်တည်လို့ရနေတာပါလားဟုလည်း တွေးဆမိရပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်ခုနှင့် တစ်ခုကို ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ ကြီးက အခွင့်အရေပေးမူနဲ့ ထိတွေ့ ဆက်ဆံပုံမှာ မတူပါ ၊
ချမ်းသာသည့်နိုင်ငံ၊ အရာရာ အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံ၊ အုပ်စုတောင့်ကြတဲ့ နိုင်များအုပ်စုနဲ့
မိမိတို့လို ဆင်းရဲသည့်အပြင် လက်နက်ကိုင် ပြသနာများကလည်းများလှသည့် အထဲအချင်းချင်းလည်း ညှိနိူင်းလို့မရ – အပေး အယူလည်းလုပ်လို့မလွယ်၊ လုပ်ပြန်ရင်လည်း ဝေဘန်သုံးသပ် အဖြေထုတ်ဘို့ထက်… အကောင်းထက် အဆိုးဘက်ကိုသာ…
ပုတ်ခတ် ပြောဆို ရေးသားမူများကလည်း နိုင်ငံအနှံ့ – နေရာအနှံ့ ရှိနေကြပြီး ညီညွတ်မူကလည်း မရှိ၊ စည်းလုံးမူသည်လည်း ကျဆုံးလုအခြေအနေ…..
လွတ်လပ်ရေးမရခင် ၁၉၄၆ လောက်မှ အစပြုခဲ့ပြီး လွတ်လပ်ရေးပြီး မှသည် ယခုခေတ်ကာလအထိ…..
တစ်ဆက် တစ်စပ်တည်း လူမူ စီးပွားဘဝများနဲ့အတူ တိုင်းရင်းသားပြသနာများဖြစ်လာခဲ့၍
ဒေသတစ်ခု၏ တိုင်းရင်းသား (design) တစ်ခုထဲမှာကလည်း ပြသနာအမျိုးအစား ကလည်း များစွာရှိနေသည့် နိုင်ငံတစ်ခုကို ထိတွေ့ ဆက်ဆံပုံနဲ့ အခွင့်အရေးပေးမူက မတူပါဘူး၊
ထိုသည်က ယနေ့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ
အဖွဲ့ ကြီး၏ တကယ့် အခြေအနေဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ – – –
ရှမ်းပြည်တွင် လူမျိုးစု (၃၃) စု ယခုအခါ မုန်းဝန်းဗမာဆိုပြီး (၃၅) မျိုးရှိသည်ဟုဆိုပြန်ပါတယ်။
အားလုံးမှလည်း မိမိတို့လူမျိုးစု နေထိုင်လိုသည့် (design) ကိုယ်စီအတွေး အယူအဆများနဲ့သာ ဖြစ်ပြီး….
ကချင်ပြည်တွင်ကချင်မျိုးနွယ်စု (၆) စုရှိပြီး၊
ကချင်မျိုးနွယ်စု (၆)စု ကလည်း…..
ကိုယ်ဲ (design) နဲ့ကိုယ် ဖြစ်ခြင်ပြီး၊
ရှမ်းမျိုးနွယ်စုကလည်း ကိုယ့်(design) နဲ့ ကိုယ်ဖြစ်ခြင်ပါတယ်၊
ရခိုင်ပြည်မှာလည်း မျိုးနွယ်စု (၇) စုအပြင် ယခုအခါ နိုင်ငံတော်မှ တရားဝင်သတ်မှတ်ပေးထားသော ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝ ဒေသကို လည်း ဥပဒေမဲ့ လုပ်ရပ်များကို အကြမ်းဖက်ဆန်ဆန်ပြုလုပ်နေခြင်း၊
ပလက်ဝ၏ ကုန်စည် စီးဆင်းမူသည် ရခိုင်ပြည်နယ်မှသာ ဖြတ်ကျော်ကြရပါတယ်။
ချင်းပြည်နယ်တွင်မျိုးနွယ်စု (၅၃) စုရှိပြီး တစ်ချို့က (၅၅)စုဟုပြောကြပါတယ်၊
ထူးခြားမူက ချင်းပြည်နယ်မှာမြို့နယ်(၉) ခုရှိ ပြီး တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ ကိုသွားလာမူခက်ခဲကာ ကိုယ့် (design) နဲ့ကိုယ်သာ ရပ်တည်လိုကြပါတယ်။
ကယားပြည်တွင် မျိုးနွယ်စု(၉) စုဟု သတ်မှတ်နေထိုင်ကြပြီး လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကထဲမှ ယခုကာလအထိ ရှိနေခဲ့သောပြသနာများလည်းရှိနေပြီးဖြစ်နေပါတယ်။
ကရင်မျိုးနွယ်စု (၁၁)မျိုးဟု သတ်မှတ်ထား ကြကာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီ၊မွန်ပြည်နယ်အပါအဝင် ကယားပြည်နယ်မှာလည်းနေထိုင်ရှိနေကြသည်ဟူ၍ ဒါကလည်း လွပ်ရေးမရခင်ကထဲက နယ်မြေ ခွဲဝေမူ ပြသာနာများဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခါ သထုံဒေသမှာလည်း ပအို့ဝ်းမျိုးနွယ်စုများနေထိုင်ကြကာ (၁၉၄၇) ပင်လုံညီလာခံသို့လည်း ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အားလုံးက ကိုယ့် (design) နဲ့ကိုယ်နေထိုင်ရပ်တည်လိုကြတာကိုလည်း အကြမ်းဖျဉ်းတွေ့ရပါတယ်၊
စာရေးသူမှ ဆောင်းပါးတွင်သုံးသော စကားလုံး (design) ဆိုသည့်စာကားလုံးမှာနိုင်ငံရေးအရ နေထိုင် ပုံဖော် လိုမူ ကို ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းပါးတွင် ဗမာ မျိုးနွယ်စု (၉) စုအကြောင်းကို ထုတ်ဖော် မပြမူသည် နိုင်ငံအနှံ့ ဒေသအသီးသီးမှာ သူတို့ သည် နေထိုင်မွေးဖွားနေခြင်းကြောင့်အပြင် သူတို့ မှာ (design) မထားခြင်းလည်းဖြစ်ပြီး သူတို့နေထိုင် ရပ်တည်သည့်
ဒေသ၏ (design) အောက်မှာသာ နေထိုင်လိုမူများလည်းပါဝင်ပါတယ်။
အထက်ပါ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးဘဝ(design) များကို ပြည်ထောင်စုကြီးအဖြစ်ရပ်တည်နိုင်စေရန် မိမိတို့ အချင်းချင်း မည်၍ မည်ပုံ ညှိနိူင်း ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး…
အဖြေ ကို တိတိ ပပ လောက်လောက် လားလား ဖြစ်စေဘို့ ကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တပ်မတော်နှင့်
သို့ပေမဲ့ ဒေသအသီးသီးမှ ရွေးချယ်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည်လည်း အချိုးကျ ပါဝင်စေရန်လည်းလိုအပ်ပါတယ်။
ပီပြင်သည့် ပြည်ထောင်စုကြီး တစ်ခုဆိုသည်မှာ အရေးကြီးလှသည့်တပ်မတော် သည် အစိုးရအကြီးအကဲ၏ ဥပဒေအရ…..
စီမံ မူအောက်တွင်သာရှိနိုင်မှသာ ထိုနိုင်ငံသည် ဥပဒေ စိုးမိုးမူရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အတူ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များသည်လည်း အသွင် ပုံသဏ္ဏန် ပြောင်းလဲ၍ (Federal Government )ဖက်ဒရယ်အစိုးရ (ဗဟိုအစိုးရ) အောက်မှာသာ ရှိကြရမှာပါ။
ပြည်ထောင်စု သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ၊
ဟူ၍ တပ်မတော်အပါအဝင် အဆိုပါ အရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များအားလုံးသည် ဗဟိုအစိုးရ၏ စီမံ တာဝန်ယူမူ အောက်သို့ ထားနိုင်မှ လက်ခံနိုင်ကြမှသာလျှင် မိမိတို့၏ ပြည်ထောင်စုကြီးသည် ဥပဒေစိုးမိုးမူများ လွှမ်းခြုံနိုင်သည့် နိုင်ငံအဖြစ် ကမ္ဘာတွင် ခန့်ခန့်ထည်ထည် ရပ်တည် နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သို့ပါ၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ(ဗဟိုအစိုးရ) သည် အားကောင်းဘို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။
ယခုမိမိရေးသည့် အကြောင်းအရာများသည် စစ်မှန်သည့် ပြည်ထောင်စုကြီးတည်ဆောက်သည့်အခါတွင် တွေ့ကြုံ ရမည့် အခက်အခဲ အခြေအနေ ကြောရိုးများသာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအရာများအား မိမိတို့အားလုံးမှ ပြည်ထောင်စုကြီး တည်ဆောက် ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ နည်း စေပြီး…..
ပိုမိုကောင်းမွန် တည့်မတ်မည့် အဖြေများကို စုပေါင်းရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ကြဘို့သည် မိမိတို့ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက် အသက်တစ်မျှ အရေးကြီးလှပါတယ်။
မိမိတို့သည် ပြည်ထောင်စုကြီးအဖြစ် ကမ္ဘာတွင် ခန့်ထည်စွာ ရပ်တည် ပြနိုင်ပါမှ ဖွံ့ ဖြိုး ချမ်းသာသည့် နိုင်ငံများစွာ နှင့် တန်းတူ ရပ်တည် အဆက်ဆံ ခံရမည် ဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏ အစပိုင်းကို ရေးသား ရှင်းပြ ပါရစေ။
ယခု အမေရိကန်၌ ဖြစ်နေသော ဆန္ဒပြမူများတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသား အချို့ က…..
နိုင်ငံသားတစ်ဦးခြင်းပိုင်ဆိုင်သည့် အရောင်းဆိုင်များကို ဝင်ရောက် လုယက် နေသည့် ဖြစ်စဉ်အား အခြားနိုင်ငံသားများမဟုတ်သော…
(၈၈၈၈) လူထု အုံကြွမူ ဖြစ်စဉ် နှင့် နိူင်းကြခြင်း၊
မိမိတို့နိုင်ငံ၏ အခြားဖြစ်စဉ်နဲ့ နိူင်းနေကြသည်ကို တွေ့နေရပါတယ်။
သူတို့ ဆိုလိုသည့်သဘောက မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရငလည်း ထိုကဲ့သို့ သို့မဟုတ် ထိုကဲသို့သောလုပ်ရပ်များထက်ပိုဆိုးပါတယ်၊
(၈၈၈၈) မှာလည်း မြန်မာတွေက လုယက်ကြတာ ဒီ့ထက်တောင်ဆိုးပါတယ် ဆိုတာလိုမျိုး ရေးသားနေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မိမိတို့၏ နိုင်ငံကို ထိုကဲ့သို့ နှိမ့်ချ ရေးသားနေသူများသည်ကား မိမိတို့ မြေမှာမွေး ၊မိမိတို့မြေမှာ နေထိုင်စားသောက်နေကြသော…..
မွေးဖွား စားသောက်ခဲ့ ကြသော…..
မိမိတို့၏ ညီရင်း အကို တစ်အူတုံဆင်းများဖြစ်နေကြသည်မှာ အလွန်ပင် ဝမ်းနည်းဖွယ်…
(၈၈၈၈) လူထုအရေးတော်ပုံကြီးတွင် ရှိခဲ့ပါတယ်။
သို့ပေမဲ့ မိမိတို့ ပြည်သူများသည် မိမိတို့နိုင်ငံသားတစ်ဦးခြင်းပိုင်ဆိုင်သည့် ဆိုင်များကို ချမ်းသာပြီး လူ့အခွင့်အရေး ဦးဆောင်နိုင်ငံဖြစ်သည့် အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ ယခု လုပ်နေသော
လုယက်နေသော အခြေအနေမျိုး မဟုတ်ခဲ့ ကြပါ။
မဆလ အစိုးရ၏ အခွင့်ထူးခံများသာ စံစား ရယူနေသည့် မေတ္တာမွန်လိုမျိုး၊ စသည်ဖြစ်…..
မိမိတို့ နိုင်ငံသားအားလုံးမှ ပိုင်ဆိုင့်ခွင့်ရှိသည်ဟု ယူဆ ထင်မှတ်ကြကာ ပြည်သူပိုင်
ဂိုထောင်အချို့ကိုသာ အခြေခံ လူများက
ရယူခဲ့ ကြတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကလည်း တောကြောင်များ၏ လမ်းကြောင်းစခဲ့မူနဲ့ အခြေအနေဖြစ်စဉ်များသာဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူ နိုင်ငံသား တစ်ဦးခြင်း ပိုင်ဆိုင်သော ဆိုင်များအား အမေရိကန်မှာ ယခုလုပ်သလိုမျိုးများ မရှိခဲ့ ကြပါ ၊ ရှားလှပါတယ်။
ယခုလို ကမ္ဘာမှာ ဝင်ဆန့်လာစေဘို့ ကြိုးစားရုန်ကန်နေရသည့် မီမိတို့ နိုင်ငံအား…
မိမိတို့ ကိုယ်တိုင်ကပင် အထင်သေး အမြင်သေး များဖြင့် ရေးသား ပြောဆိုမူ မှန်သမျှ အား ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေကြောင်း နှင့်
မိမိတို့ အားလုံးက တည်ဆောက်
ကာကွယ်ကြပါစေရန် ဖွင့် ဆို…..
အလေးထားစွာဖြင့်. ကိုသိန်းဌေး ၈၈ ပဲခူး